मुख तथा सास गनाउने समस्याले लज्जित हुनुपरेको छ ? उसोभए यस्ता छन् छुटकारा पाउने उपाय – Online Nepal
१०. शुद्ध हलुका र सुपाच्य भोजन गर्ने ।११. जिव्रो माथिल्लो भागमा लागेको लेउजस्तो फोहर सफा गर्ने र रातो टमाटरमा नून हालेर खाने ।१२. सफासग धोएको काचो पालुङ्गो र बन्दा चपाएर विहान बेलुका खाने गर्नाले पनि राहत मिल्ने चिकित्सकहरु बताउछन ।
१३. आधा चम्चा सुठोको धुलो विहान बेलुका खाना पछि खाने गरेमा पनि त्यसले दुर्गन्ध घटाउछ ।१४. खाना पछि तुलसी पत्ता, पुदिन र काँचो सलगम चपाएर खाने गर्नाले पनि समस्या समाधान हुन्छ ।१५. कागती र अमलाको प्रयोग बढाएमा पनि दुर्गन्ध कम हुन्छ ।
१६. प्रसस्त पानी पिउनी पीउने, थोरै थोरै भएपनि पानी पिइ राख्नु राम्रो हुन्छ ।१७. ‘टङ क्लिनर’ले विहान जिव्रो सफा गर्ने र विहान खाना खाएपछि र सुत्नु अघि ब्रस र मन्जनले दाँत सफा गर्ने१८. कागती र पुदिनाको रस एक गिलास मनतातो पानीमा मिलाएर विहान बेलुका मुख कुल्ला गर्ने गरेमा पनि समस्या समाधान हुनसक्छ ।
१९. त्यसबाहेक सुगन्धीत फलहरु जस्तौ ल्वाङ, सुकमेल, अलैची मुखमा राख्नाले पनि दुर्गन्ध कम हुन्छ । भिटामिन सि र क्याल्सियम बढाउने खाद्य पदार्थको सेवन गर्ने ।२०. बढी अपाच्य खानेकुरा नखाने, तारेको पिरो मसलादार र चटपटे बस्तु नखाने ।२१. धेरै गुलियो, खाद्य पदार्थबाट टाढै रहने, चिया, कफि, रक्सी, माछा, मासु कम खाने र खाईसकेपछि राम्ररी दाँत जिव्रो सफा गर्ने र पानी पीउने
Prevपक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित !
Nextआयो खुशीको खबर,अमेरिकाले गर्यो नेपाललाई यतिठुलो सहयोग, अमेरिकी सरकार नेपालसँग साझदारी गर्न तयार (हेर्नुहोस भिडियो)